Taageerada kuwa la kulmaayo xadgubyada - UNHCR Indonesia
Diiwaangelinta iyo Dukumentiyada
Dib u dejinta iyo fursadaha kale ee mustaqbalka
Dib u dejinta
Bulshada ama Kafiilka gaarka ah
Ku noqoshada dalkaagi
Wadooyinka Dhamaystirka ah: Karti Ka Baxsan Xuduudaha
ka warbixinta dhaqan-xumada la xiriirta shaqaalaha hay’adaha gargaarka bini’aadantinimada
Ku saabsan UNHCR ee Indonesia
korona faayrus (COVID-19)
Adeegyada lagu bixiyo Indonesia
Taageerada kuwa la kulmaayo xadgubyada
Fursado lasiinayo ururada ay hogaaminayaan dadka barakacayasha ah iyo kuwo aan wadan dhalasho ka haysan
Kuwa la kulmaayo xadgudubyada, oo ay ku jiraan xadgudub galmo ama xadgudub kasta oo ay sababto in aad tahay lab ama dheddig marnaba khaladkaaga ma aha! Marnaba xili dambe ma ahan ama ha is dhihin waqtiga aad cabasho ama caawimaad raadsan laheed waa la dhaafay , haddii aad rabto, UNHCR iyo la-hawlgalayaasheeda ayaa diyaar u ah inay ku taageeraan.
Haddii aad la kulanto nooc kasta oo ka mid ah dhibaatayn galmo, rabshad (guriga ama dibadda guriga) ama hanjabaad rabshad, fadlan isla markiiba la xiriir mid ka mid ah khadadka hoose:
Catholic Relief Service Hotline: 📞 +62 811 9670 250 or
UNHCR Dedicated Phone Number: 📞 +62 811 1000 424
Waxa lagu siin doonaa talo sir ah oo ku saabsan waxa xiga ee la samaynayo iyo sida loo helo taageerada aad u baahan tahay.
Waa maxay galmada iyo xadgudubyada ku salaysan jinsiga (SGBV)?
Xadgudubyada jireed iyo kuwa shucuureed — oo ah qaab xoog, jujuub, hanjabaad, iyo khiyaano – ka dhanka ah mid kale sababtoo ah jinsigooda waxaa loo yaqaanaa xadgudub galmo iyo mid ku salaysan jinsiga SGBV. Iyadoo dhibanayaal badan iyo kuwa badbaaday ay yihiin haween iyo gabdho, rag iyo wiilal sidoo kale waxay la kulmi karaan SGBV.
Kufsi: Galid aan la rabin, oo aan raali laga ahayn. Tan waxa kale oo ka mid ah fal galmo kasta oo lala sameeyo ilmo ka yar da’da 18.
Xadgudubka Galmada: hanjabaad kasta ama fal galmo oo la sameeyo ogolaansho la’aan, oo uu ku jiro guurka dhexdiisa. Tan waxa kale oo ka mid ah fal kasta oo galmo ah oo lala sameeyo ilmo ka yar da’da 18, gudniinka fircooniga ah (FGM), xadgudubka galmada iyo dhibaataynta, dhiig-miirashada, iyo dhilleysiga qasabka ah.
Weerar jireed: Hanjabaado ama ficilo dhaawac jireed, hub ama la’aan. Tan waxaa ka mid ah garaacid, feedh, naafayn, dil.
Guurka Qasabka : Guurka ka dhanka ah rabitaanka qofka.
Guurka Ilmaha: Guur kasta oo ilmo ah (ka yar da’da 18), lab iyo dhedig kasta diidmada agabka, fursadaha, ama adeegyada: Go’doominta bulshada iyo dhaqaalaha iyo diidmada helitaanka waxbarashada, daryeelka caafimaadka (ay ku jiraan ka hortagga uurka), shaqada, iyo xuquuqaha aasaasiga ah.
Xadgudub nafsiyeed/dareen: Gelin xanuun maskaxeed ama shucuureed, oo ay ku jiraan hanjabaad waxyeelo ama dhaqamo cay, hoos u dhiga, ama ka fogeeya qofka asxaabtiisa iyo qoyskiisa. Kuwaas waxa kale oo ku jiri kara aflagaado, burburinta waxyaalaha la jecel yahay, dareenka aan loo baahnayn, ama hadallo hanjabaad ah, dhaqdhaqaaqyo ama erayo qoran.